Imithetho yokuGaxana: Ukuthelekiswa kwe-US, UK, CA, DE, kunye ne-AU | Martech Zone
Imithetho yokuGaxana: Ukuthelekiswa kwe-US, UK, CA, DE, kunye ne-AU
NgoMvulo, Julayi 20, 2015 NgeCawa, ngoJulayi 19, 2015 Douglas Karr
Njengokuba uqoqosho lwehlabathi luba yinyani, kusayinwa iimvumelwano eziqinisekisa ukuba ilizwe ngalinye alihloniphi imithetho yelinye kuphela - banokude bathabathe amanyathelo ngesohlwayo kwiinkampani ezophula loo mithetho. Indawo enye ekugxilwe kuyo kuyo nayiphi na inkampani ethumela i-imeyile kwilizwe liphela kukuqonda imeko yelizwe ngalinye njengoko kubhekiswa kwi-imeyile kunye nogaxekile.
Ukuba ungathanda ukubeka esweni ukufakwa kwebhokisi yakho engenayo kunye nodumo kwilizwe liphela, qiniseka ukuba ubhalisela 250ok. Banokhuselo lwe-ISP lwehlabathi kwizisombululo zabo kwaye baya kubeka iliso ekuthumeleni i-IP ngokuchasene noluhlu olumnyama.
Umsonto oqhelekileyo kuwo onke amazwe kukuqinisekisa ukuba urekhoda indlela ababhalisile bakho abakhethe ukungena ngayo, apho bakhethe ukungena khona, kwaye uqhubeke nokugcina uluhlu lwe-imeyile olucocekileyo-ukucoca ii-imeyile ezingaphendulwanga ezivela kwidatha yakho. Amagqabantshintshi e-infographic:
I-United States (i-US) i-CAN-SPAM - Sukusebenzisa ulwazi lwentloko okanye olulahlekisayo, ungasebenzisi imigca yezihloko ezikhohlisayo, xelela abamkeli apho ukhoyo, xelela abamkeli ukuba bangaphuma njani ekufumaneni i-imeyile yexesha elizayo kwaye uhloniphe izicelo zokuphuma kwangoko. Iinkcukacha ezithe vetshe: NGOKWENZA I-SPAM
ECanada (CA) CASL -Thumela kuphela kwidilesi yemeyile esekwe kwimvume, uchonge igama lakho, uchonge ishishini lakho, kwaye unike ubungqina bokusayina xa uceliwe. Iinkcukacha ezithe vetshe: ICASL
Isikhokelo sase-United Kingdom (e-UK) se-EC 2003 -Ungathumeli ukuthengisa ngokuthe ngqo ngaphandle kwemvume ngaphandle kokuba kukho ubudlelwane obusekwe ngaphambili. Iinkcukacha ezithe vetshe: Isikhokelo se-EC 2003
Australia (AU) Umthetho wogaxekile 2003 -Ungathumeli i-imeyile engacelwanga, faka ukungasebenzi ekubhaliseni kuzo zonke ii-imeyile, kwaye ungasebenzisi isoftware yokuvuna idilesi. Iinkcukacha ezithe vetshe: Umthetho wogaxekile 2003
IJamani (i-DE) Umthetho woKhuseleko lweDatha -Ungathumeli imeyile engacelwanga, kufuneka ube nemvume. Sukufihla isazisi somthumeli, unike idilesi efanelekileyo yezicelo zokuphuma, kwaye unike ubungqina bokusayina xa ubuziwe. Iinkcukacha ezithe vetshe: Umthetho woKhuseleko lweDatha
The Umyalelo we-EU kwiMfihlo isebenza kuwo onke amalungu e-EU. Ngokwe-European Union Directive kwiMfihlo, kufuneka ubenemvume ecacileyo ngaphambi kokuba uthumele nayiphi na i-imeyile yorhwebo, ukukhetha ukuphuma okanye ukungabhalisi kufuneka kube lula kwaye kucace kubamkeli bemiyalezo yorhwebo, kwaye kufuneka uthobele imigaqo yelizwe ngalinye eyongezelelweyo .
le infographic evela mpendulo mpendulo Iqaqambisa umahluko ophambili womthetho wogaxekile ovela kumazwe akuMntla Melika naseYurophu.
tags: Australia isenzo sogaxekileUmthetho wogaxekile wase-Australia 2003ugaxekile-spamumthetho wogaxekile waseCanadaI-caslIsikhokelo se-ec 2003IYurophu imithetho yogaxekileUmyalelo womanyano waseYurophu kwimfihloiJamani isenzo sokhuselo lwedathaJemani umthetho wogaxekileispemuumthetho wogaxekileumthetho wogaxekileuk spam umthethoUmthetho wobukumkani obumanyeneyo
Pinegrow: Umhleli weDesktop omangalisayo ngokudityaniswa kweWordPress
Nasi isizathu sokuba kufuneka udibanise ii-imeyile kunye neQhinga leMithombo yeendaba